साताको पहिलो दिन आइतबार सबैजसो कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से सूचक ६४.१४ अंकले ओरालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आजैदेखि परीक्षणका रुपमा कारोबार समय १ घण्टा थप्दै कारोबारमा सुधार आउने दाबी गरे पनि बजारमा पहिलेकै पर
नेपाल पुनःबीमा कम्पनीले एक अर्ब ६० करोड बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला ठूलो मात्राको साधारण सेयर बिक्री हुने भएको छ।नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको स्वीकृतिअनुसार नेपाल पुनःबीमा कम
काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडा दुई वर्षे कायर्काल समाप्त गरी पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएको दिन सेयर बजार (नेप्से परिसुचक) ६८ दशमलव ४७ अंकले गिरावट आएको छ। नेप्से गिरावट हुनको कारण नै अर्थमन्त्रीको सेयर
काठमाडौ । सोमबार उच्च अंकले ओरालो लागेर सर्किट ब्रेक लागेर बन्द भएको धितोपत्र बजारमा कारोवार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार भने दोहोरो अंकले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मंगलबार नेप्से प
काठमाडौं । सेयरबजार कारोबार मापन गर्ने नेप्से सूचक आज ५.२४ अंकले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सूचक बढेर कारोबार अवधिमा १४०५.२५ विन्दुमा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सिटिभ सूचक प
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयरबजार परिसूचक नेप्से १.३९ अंकले घटेको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक पनि आज १.३२ अंकले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज कुल १ सय ७
साताको पहिलो कारोबार दिन सेयरबजारमा दोहोरो अंकको गिरावट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयरबजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ। बजार कारोबार मापक नेप्से १३.७० अंकले घटेको हो। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक पनि ३ अंकले घटेको नेपाल स्टक
कारोबारको अन्तिम दिन सेयरबजार घट्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयरबजार ओरालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बजार मापन गर्ने नेप्से सूचक ८.६७ अंकले घटेर १३३३.६९ विन्दुमा रोकिएको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन
सेयरबजारमा सामान्य सुधार, डेढ अर्बको सेयर बिक्यो
सेयरबजारमा सोमबार सामान्य सुधार भएको छ। आज बजार कारोबार मापन गर्ने नेप्से सूचक २.४९ अंकले बढेको हो। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक १.१६ अंकले बढेको छ। सूचक सामान्य अंकले बढे पनि १३४९.
साढे १९ अंकले बढ्यो सेयरबजार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयरबजार दोहोरो अंकले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बिहीबार नेप्से सूचक १९.५१ ले र ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक ३.५७ अंकले बढेको हो। आ
सेयरबजारमा ५.५२ अंकको सुधार भएको छ। अघिल्लो दिन भारी अंकले बढेको नेप्से आज उक्त अंकले बढेर १३०६.१५ अंकमा कायम भएको हो। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक भने शून्य दशमलव ४८ अंकले घटेको छ।
सेयरबजार २४ अंकले बढ्याे, ९१ करोडकाे सेयर बिक्री
आइतबार दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज भने झण्डै २४ अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से २३.९५ विन्दुले बढेर एक हजार ३००.६२ मा पुगेको छ